I-Shannon Airport 15min Bunratty 5min I-Limerick 15 min
Le yindlu ebanzi enendawo yokungena yangasese enezindawo zokwenza itiye nekhofi. Inegumbi elikhulu eliphindwe kabili elinombhede olingana nenkosi. Inendlu yokugezela yangasese.Iyaphumula futhi esezingeni eliphezulu ngenhlanzeko nelineni lombhede. Kukhona indawo yokungena yangasese ngemuva kwekhaya lethu. Izihambeli zethu zinokhiye wazo wokufinyelela.Kunevulandi ngaphandle ukuze uhlale futhi uphumule. Ibhulakufesi lezwekazi linikezwa kuze kube ngu-10 AM endlini yokudlela.
Sicela usazise isikhathi sakho sokufika ngosuku olwandulela ukufika kwakho.
Le yindlu ebanzi enendawo yokungena yangasese enezindawo zokwenza itiye nekhofi. Inegumbi elikhulu eliphindwe kabili elinombhede olingana nenkosi. Inendlu yokugezela yangasese.Iyaphumula futhi esezingeni eliphezulu ngenhlanzeko nelineni lombhede. Kukhona indawo yokungena yangasese ngemuva kwekhaya lethu. Izihambeli zethu zinokhiye wazo wokufinyelela.Kunevulandi ngaphandle ukuze uhlale futhi uphumul…
4.97(115 okushiwo abanye)
4.97 (izibuyekezo ezingu-115)
Indlu yethu itholakala esigodini sase-portdrine Cratloe Co Clare.Iyindawo ethule futhi ephephile endaweni emaphakathi nje imizuzu emi-5 ukuya eBunratty Castle kanye nepaki labantu. Isikhumulo sezindiza saseShannon sihamba imizuzu eyi-15 kuphela. Incwadi yami yomhlahlandlela izokunikeza amathiphu ezindawo ezinhle nokudla okufanele uzivakashele eduze kwendlu yethu.
Sihlala sitholakala ukuze sikusize nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo. Ungangabazi ukuxhumana nathi mathupha ekhaya lethu noma ngokusithumela umlayezo.